Wariyaha Tv-ga Dijital ah | Qalabka Gudbinta Uhf Tv | Gudbiyaha FM-ka ee jaban oo Wacan
Xalka Turnkey TV
FMUSER Buuxi TV HD Saldhig
TV iyo HD istuudiyaha oo dhammaystiran oo aan caadi ahayn.
Tusaalahan xalka istuudiyaha HD ee TV-ga, waxaanu gelinay hal Studio Main iyo hal habaynta istuudiyaha News, oo leh qolka kantaroolka Master-ka ee u dambeeya iyo laba qol oo tafatir ah.
Automation-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad ku barnaamijto gudbintaada, oo wata qalabka wax lagu shubo, buuxinta, garaafyada astaanta, garaafyada caadiga ah, garaafyada horumarsan, maareeyaha aaladaha dibadda, toosan, qasiyaha tooska ah, iyo maamulka fariinta dhagaystayaasha.
Waxa kale oo ku jira qalab kale oo loogu talagalay isku dhafka maqalka iyo duubista SSD, fududaynta isdhexgalka kamaradaha, hawlwadeenada, iyo istuudiyaha kale.
Labada marxaladoodba waxaa lagu bixiyaa kamarado, Teleprompter, PTZ kamaradaha, tripods, Chroma Key asalka, iyo nalalka si loo helo sawirka midabka ugu saxsan uguna wanaagsan.
Dhammaan istuudiyaha waxay ku xiran yihiin shabakadda, awood u leh inay isweydaarsadaan faylalka warbaahinta iyo waxa ku jira.
Istuudiyaha ugu weyn iyo istuudiyaha wararka labaduba waxay leeyihiin qolkooda kantaroolka, oo ay ku jiraan Tricaster all-in-one switcher wax soo saarka tooska ah iyo dusha sare ee kontoroolka isku dhafka kamaradaha, muuqaalka, sawirada, maqalka, cinwaannada, ilaha shabakada, iyo saamaynta dhaqdhaqaaqa leh. Waxa ku jira astaamo ay ka mid yihiin jaangooyooyin farsamaysan, tafatirka qoraalka tooska ah, tafatiraha warbaahinta, iyo wadaagga shabakadaha bulshada.
Tally iyo intercom waxay ku xiran yihiin kamaradaha waxayna bixiyaan xiriir sahlan oo u dhexeeya masraxa iyo qolka kantaroolka.
Qolka kantaroolka Master-ka ee ugu dambeeya wuxuu ka helaa agabka dhammaan istuudiyaha wuxuuna go'aamiyaa waxa hawada dhacaya, samaynta furayaasha, xakamaynta kama dambaysta ah, iyo toosinta u dhexeeya istuudiyaha.